Dad badan ayaa sheegaya in barashada Shiinaha ay adag tahay. Xaqiiqdii, maahan. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in jilayaasha Shiinaha ay runtii u baahan yihiin laylisyo xusuus ah, Shiineysku sidoo kale wuxuu leeyahay fudeyd marka loo eego luqadaha kale. Shiinaha Pinyin waa mid kooban oo cad, kuna qoran xarfaha Latin, iyo nambarka ...Akhri wax dheeraad ah »
Dhawaan, arday leh aasaas eber dhammaystiran, markay baratay saddex fasal, waxay ii sheegtay inay u beddelayso macallin ku takhasusay afka Ingiriiska maxaa yeelay ma doonayso inay barato naxwaha Shiinaha ama waxyaabaha la xiriira HSK, laakiin waxay doonaysaa oo keliya inay wax barto qaar ka mid ah luqadda nolol maalmeedka, sida sida Buyi ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa Maxay Macallin Shiine Caalami ah?
Macallimiinta Shiinaha ee caalamiga ah waa macallimiin wax ku bara Shiinaha Shiinaha si waafaqsan heerarka caalamiga ah, bartilmaameedyada wax lagu baranayana waa dad ka yimid waddamo ama jinsiyado luuqadooda hooyo ay tahay luuqado kale. Marti galinta Ciyaaraha Olambikada iyo World Expo waxay adduunka siisay fursad dheeri ah ...Akhri wax dheeraad ah »